Tena > Bisikileta > Ny bisikileta Carb mba hampihena ny lanja - ny fomba fanapahana hevitra
Ny bisikileta Carb mba hampihena ny lanja - ny fomba fanapahana hevitra
Afaka manampy anao ve izanymampihena lanja? Anecdotally,bisikileta amin'ny karbaonamety afaka manampy olonamampihena lanja. Na izany aza, tsy misy fikarohana siantifika izay manolotra soso-kevitra ankehitrinybisikileta amin'ny karbaonadia mandaitra kokoa na latsaka amin'nyfihenan-danjanoho ny sakafo hafa.30 mart 2021
Amin'ity lahatsoratra ity dia hambarako ny antony mahatonga ny bisikileta amin'ny gliosida ho tsara kokoa sy tsara lavitra noho ny keto ho an'ny olona mihoatra ny 40 taona. Ka raha eo amin'ny faha-40, 50, na 60 taona anao, dia te ho very mafy loha ianao, te ho ela velona, ​​te ho tanora kokoa, ary te hiatrika olana ara-pahasalamana ankehitriny. Mitandrema tsara fa tiako hampahafantarina anao ihany koa ny protokoleta fihinana hormonina vaovao iray vaovao sy vaovao izay azonao ianarana amin'ny alàlan'ny fikitihana na fanoratana ny rohy ato amin'ity lahatsoratra ity momba ny fomba fanaovana saka keto nefa tsy mijaly amin'ny vokadratsin'ny hormonina ratsy izay horesahiko aminao eo amin'ny solaitrabe.
Ankehitriny rehefa mankany amin'ny tranokalako ianao dia tiako ho fantatrao ny zavatra roa. Laharana voalohany, hahita fanadihadiana am-polony maro samihafa ianao navoaka etsy ambany sy tohiny manerana ny tranonkala. Tamin'izany no nahafantaranao izay rehetra lazaiko aminao ato amin'ity lahatsoratra ity dia tohanan'ny fandinihana nataon'ny mpiara-mianatra, siantifika ary navoaka.
Shaun Hadsall no anarako. Manam-pahaizana momba ny tavy matavy 47 taona aho. Ary rehefa afaka 25 taona tao amin'ity indostria ity dia fantatro fa ny olona mihoatra ny 40 dia mila mihinana sy misakafo amin'ny fomba hafa noho ny an'ny tanora satria ny makiazy hormonina misy azy ireo dia samy hafa be amin'ireo zavatra toy ny keto izay mandeha ankehitriny - na dia miasa aza izy ireo dia mety vahaolana vetivety dia mijaly noho ny fihenan'ny hormonina sy ny fiakaranao haingana ianao.
Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminao aho hoe ahoana no ahafahanao mahazo ireo tombontsoa ara-tsakafo keto rehetra nefa tsy mijaly amin'ireo vokadratsinao ireo. Ny zavatra voalohany ho hitanao eto dia ny sarin'ny vatanao. Ary fantatro fa boaty fotsiny io.
Saingy tiako ny hanatsotra izany ho anao. Ary hasehoko anao ny zavatra toy ny sakafo keto hanitsiana ny vatana amin'ny tavy. Ary hizara aminao ihany koa aho ny fomba handresena ny fihenan'ny hormonina miaraka aminy.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny vatanao mitahiry angovo avy amin'ny gliosida ao amin'ny hozatra sy ny atin'ny aty. Ka ity no fitoeram-pitahirizanao na hozatrao sy hozatra amin'ny atiny. Eto ianao dia hahita taolana, sela ary taova rehetra mahatonga hormonina.
Ary ny fikarohana ao amin'ny diary Obesity dia mampiseho fa ny olona mihoatra ny 40 izay mifantoka amin'ny hormonina fotsiny dia very lanja 65% kokoa noho ireo izay mifantoka amin'ny fitazonana ny vatany amin'ny tsy fahampian'ny kaloria amin'ny alàlan'ny zavatra toy ny saka keto. Ka eto no ahitanao ny toerana itehirizan'ny vatanao tavy. Tavy voatahiry io.
Ka izay mitranga amin'ny farany dia amin'ny sakafo isan'andro, matetika dia mihinana gliosida isan'andro isika. Ary isaky ny mihinana gliosida isika, ny vatantsika dia mampiasa azy io avy hatrany ho angovo, na mitahiry azy ireo avy hatrany ho angovo eny an-dàlana na ianao, na izany aza, raha mipetraka ianao ary manana sakafo be gliosidratika lehibe dia hanomboka hanao izany ny vatanao. mitahiry fitehirizana angovo ao anaty tavy hozatra sy atiny Rehefa mihinana an'ireny sakafo isan'andro ireny ianao, dia hofenoina io glycogen io rehefa tsy mihetsika ianao na manao fanatanjahan-tena. Ka hofenoina avy hatrany ny tankinao.
Isaky ny mihinana gliosida iray ianao dia miraraka eto ary voatahiry ho matavy, izay ilalaovana zavatra toy ny saka keto. Ny trano rehetra misy amin'ny sakafo keto dia manafoana izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fialana gliosida. Karaoty gliosida 5% ihany no fihinananao.
drafitra fanofanana ho an'ny bisikileta
Mihinana tavy mpinamana 75%, proteinina 20% ianao, noho izany dia esorinao tanteraka ny glucose ao amin'ny drafitrao, izay mety hahafaty ny hormoninao. Ary holazaiko aminao bebe kokoa momba izany ao anatin'ny iray segondra, noho izany ny hevitra iray manontolo eto dia ny manafoana ny tanky fitehirizana amin'ny alàlan'ny gliosida rehetra amin'ny sakafo keto, noho izany ny vatanao dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mandoro izay eto ho an'ny angovo , satria tsy misy na inona na inona ao, dia ho avy eto izy io. Ary hanomboka handoro tavy ho an'ny angovo izy io.
Ka drafitra fampihenana mavesatra tokoa izany. Na izany aza, ny fikarohana siantifika sy fikarohana dia mampiseho fa aorian'ny herinandro hanarahana drafitra toy izany dia mety hisy vokany ratsy maro. Ny zavatra voalohany hitranga dia ny fampihenanao ny hormonina tiroidanao.
Ny tiroidinao no tena fihary ao amin'ny metabolisma. Mifehy ny lanjan'ny vatanao izany. Ary mifehy ny hafainganam-pandehan'ny metabolismao izany.
Ary noho izany aorian'ny herinandro tsy misy glucose ao amin'ny sakafonao dia ajanonao ny haavon'ny tiroidanao satria ny glucose dia vato manorina ny TSAs, ny hormonina mandrisika tiroida. Ny fikarohana dia mampiseho ihany koa fa ny haavon'ny leptin dia afaka milatsaka hatramin'ny 50% aorian'ny herinandro iray amin'ny sakafo ity Ampiasao ny Indray Andro Diet Solution amin'ny tranokalako izay ahafahanao mahazo ireo tombony azo avy amin'ny fatiantoka matavy tsy misy an'ireo vokadratika ratsy ireo. . Ary misy andry telo amin'ny fomba fiasan'ity.
Ary tiako ny hizara rig ht anao telo miaraka aminao izao. Ny andry voalohany dia ny fotoana. Ka raha mandamina tsara ny sakafonao ianao mandritra ny telo ka hatramin'ny dimy andro isan-kerinandro dia azonao atao ny mampitombo ny haavon'ny hormonina fitomboanao mihoatra ny 1.000%.
Hampitombo ny adrenalinina sy ny glukagon koa ianao. Ireo hormonina roa ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana tavy voatahiry ao amin'ny lalan-drà, izay azo omena ny hozatra miasa sy may, ary antsoina koa hoe sela matavy mihena sy mandoro. Ny zavatra faharoa ampiasainay amin'ny vahaolana fihinana iray andro ao amin'ny tranonkalako dia ny fitambaran'ny sakafo stratejika satria ahafahanao mifehy ny insuline.
Tadidio fa rehefa avo ny tahan'ny insuline anao dia tsy afaka mampiasa tavy ho an'ny solika ny vatanao. Ka ny hevitra iray dia ny fampifangaroana ny sakafonao mba hijanonan'ny insuline tsara mba hahafahan'ny vatana miditra mora foana amin'ny tavy ho loharano azo avy amin'ny solika. Ankehitriny dia voafehinao ihany koa ny tsingerin'ny kortisol anao, noho izany ny fanananao iray isan'alina Raha mihinana sakafo stratejika ianao mandritra ny sakafo hariva, dia ho gaga sy hahafinaritra anao ianao, azonao atao ny mifehy ny tsingerin'ny kortisol anao.
Ary inona? Izany dia hanampy anao hamoaka melatonin sy serotonin bebe kokoa, izay hiteraka torimaso lalina, hanampy anao ho sitrana bebe kokoa, ary hamoaka hormonina mitombo bebe kokoa rehefa matory ianao. Ny andry fahatelo dia ny refy amin'ny karbaona avo. Mamerina ny fanovana T4 ho T3 anao tokoa ianao isan-kerinandro.
Hitanao fa aorian'ny fihenan'ny haavon'ny tiroidanao sy ny leptin anao dia manomboka mihena ny metabolismao. Ajanonao io fihenan'ny metabolisma io satria mandany gliokaozy ianao. Ity ny fomba fampitomboana ny fiovam-po T4 ka hatramin'ny T3, ny fampitomboana ny hormonina tiroidanao ary ny fampitomboana ny fahatsapanao ny leptin koa.
Ka io rehetra io dia ampahany amin'ny sakafoko iray andro no vahaolana mety ho hitanao ao amin'ny tranonkalako. Efa ho fito minitra izahay izao. Raha mbola mijery ianao dia misaotra.
Manantena aho fa nianatra zavatra avy amin'izany ianao. Zahao ny rafitray. Manome toky anao aho, raha mihoatra ny 40 taona ianao ary niady tamin'ny fihenan'ny lanja - ny tokiko sy ny antoka omeko anao dia izao.
Raha mandray andraikitra ianao ary mampiasa io protokolin-tsakafo iray andro io mandritra ny telo na efatra andro isan-kerinandro dia hanova tanteraka ny vatanao izany. Ary izany dia hiditra amin'ny faritra hafa rehetra amin'ny fiainanao. Misaotra anao nijery.
Ary Andriamanitra hitahy.
Manao ahoana ny halaviran'ny laninao amin'ny bisikileta karbaona?
KB: 'Ny fihenan-danja diamaharitra 3-4 herinandro arakaraka ny sakafonao sy ny vatanao. Saingy, amin'ny resaka fahatsapana tsara sy fananana angovo bebe kokoa,ianareoHanomboka ahonyjereo ny fahasamihafana aorian'ny herinandro voalohany. '15 Sep 2020
Sakafo bisikileta karbohidratika Sakafo fihinan'ny karbaona ambany
Ahoana no andehanan'ny bisikileta amin'ny bisikileta amin'ny tavy?
Ny fitsipiky nybisikileta karbôna diamihinana vitsy dia vitsykarbaonanandritra ny roa andro nifanesy, narahin'ny andro iray fihinanana betsaka nykarbaona. Midika izany fa, toy ny fitehirizana ny vatanao ihanykarbaonatahirydiaefa ho lany, ny avokarbaonaandrodiamamelombelona ny herinao ary manafaingana ny metabolisma, mitarika amin'ny lehibe kokoa azamatavyfahaverezana.
Ahoana no ataonao amin'ny tsingerin'ny karbaona?
AhoanaAzaManomboka ianaoCarb Cycling?
Mandanjalanja ny makrô. Zarao amin'ireo macronutrients anao ireo kaloria ireo:karbaona, proteinina ary tavy.
Aza nix ny fibre. Rehefa mihinana kely kokoa ianaogliosida,manaoazonao antoka fa mitazona ny fibre ianao.
Mihinana ampy, na dia amin'ny ambany aza-karbaonaandro. Mandeha ny atidohanaokarbaona, na manokana kokoa, momba ny siramamy siramamy.
10 Mey 2021
Moa ve ny bisikileta amin'ny bisikileta mety hiteraka fisondrotana?
Miala sasatra kely amin'nykarbaona boribory afakaomeo fotoana may ny vatanaomatavyraha tokony hokarbaonaary hozatra. Fa zava-dehibe ny mahatadidy fa raha tsy manao fanatanjahan-tena be loatra ianao na fampiofanana mafy mandritra izanybisikileta amin'ny karbaona, avo-karbaonaandro mety hahatonga anaomahazo lanja.20 Jul 2020 g.
Afaka misakafo fisakafoanana ve ianao rehefa mandeha bisikileta?
Mino izany na tsia, io dia fomba fanao amin'ny sakafo tena izy fantatra amin'ny anarana hoebisikileta amin'ny karbaona, izay misy fifandimbiasana eo anelanelan'ny andro misy gliosidra mandritra ny enina andro ary ao anatin'izany ny valisoa na “hanambaka'androamin'ny fahafito.16.03.2016
Inona ny fandaharam-potoana bisikileta amin'ny bisikileta tsara?
Mahazatra isan-kerinandrobisikileta amin'ny karbaonasakafo dia mety ahitana roa avo-karbaonaandro, roa antonony-karbaonaandro sy telo ambany-karbaonaandro. Ny fihinanana proteinina dia matetika miteraka anelanelan'ny andro, fa ny fihinanana tavy kosa dia miovaova arakaraka nykarbaonafihinanana. Avokarbaonany andro mazàna midika hoe ambany tavy, fa ny ambany-karbaonamatavy be ny andro.12.06.2017
Eny,bisikileta afakaVonjeovery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenymatavyvery ary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampidina azytavy kibo.2 feb 2021
Inona no fomba mora indrindra amin'ny tsingerin'ny karbaona?
Azonao atao ny mampiditra ny 'tsia-karbaonaAndro, rehefa manana latsaky ny 30 grama ianaokarbaonamandritra ny tontolo andro. Safidy iray hafa ny fanarahana drafitra iray andanianao 3 andro hihinana kelykarbaona: manodidina ny 100-125 grama isan'andro. Avy eo, mandany 2 andro mihinana sakafo be ianaokarbaona(175-275 grama) amin'ny andro mavitrika kokoa.20 Jul 2020 g.
Tsara kokoa ve ny bisikileta keto na karbaona?
“Raha mahatsapa ianaotsara kokoatsy misakafokarbaonaindraindray ary toa tsy manelingelina ny lanjanao izany,bisikileta ketomety mety aminao. Etsy ankilany, maro ny olona toa mahazo tombony amin'ny fijanonana tsy tapakaketo namifandimbyIRETOamin'nykarbaona ambany(harato manodidina ny 30-60 gramakarbaonaisan'andro), 'hoy ny fanazavany.9 des 2019
Hahazo lanja ve aho raha mihinana karbao?
Manaova gliosidamanamboatra anaomatavy? Sakafo rehetraafakaantonymitombo lanja rahaianareomihinanabe loatra. Na avo ny sakafonaomatavyna avo lentagliosida,RAHAianao matetikamanimbaangovo bebe kokoa noho ny ampiasain'ny vatanao, mety ho izany ianaomahazo lanja. Ny gram ho an'ny gram, ny gliosida dia misy kaloria kely kokoa noho nymatavy.
Ahoana no fiasan'ny bisikileta gazy amin'ny fihenan'ny lanja?
Ny bisikileta Carb dia karazana drafitra fisakafoanana izay misy fihinanana gliosida betsaka kokoa amin'ny andro sasany amin'ny herinandro, fa ny manao ny mifanohitra amin'izay amin'ny andro hafa: manapaka karbaona tena ambany tokoa mba hahatratrarana fihenan-danja mora kokoa.
Iza no drafitra fihinan'ny bisikileta tsara indrindra?
Ny bisikilety Carb - ny fihinana karbôbika betsaka raha tsy amin'ny andro sasany amin'ny herinandro dia inoana fa iray amin'ireo drafitra sakafo tsara indrindra hampihena haingana ny lanjany ary hahazo hozatra satria manentana ny asan'ny digestive sy metabolika izay misy fiatraikany tsara amin'ny fifehezana lanja.
pose yoga mandoro kaloria
Inona no maha samy hafa ny bisikileta avo sy ny bisikileta ambany?
Ny sakafo mahazatra amin'ny bisikileta mahazatra isan-kerinandro dia mety misy andro karbaona roa, andro karbaona antonony roa ary andro ambany karbaona telo. Ny fihinanana proteinina dia matetika miteraka anelanelan'ny andro, fa ny fihinanana tavy kosa dia miovaova arakaraka ny fihinanana karbôna. Ny andro misy karbaona avo lenta dia mazàna midika tavy ambany, fa ny ambany karbaona kosa dia matavy be.